iPhone မှာ မြန်မာဖောင့် ထည့်သွင်းနည်း ~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Home » Mobile Software » iPhone မှာ မြန်မာဖောင့် ထည့်သွင်းနည်း
By နေမင်းမောင်4:29 AM8 comments
iPhone မှာ မြန်မာဖောင့် ထည့်သွင်းနည်း ကို ကျွန်တော်ဖတ်ရှုထားတာကို ပြန်ပြီး ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် မစမ်းသပ်ရသေးတဲ့ အတွက် မည်သည့် အရာမျှဝင်ရောက်ဖြည့်စွက်ထားခြင်း မရှိပဲ မူရင်းအတိုင်း တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်. . .
အောက်ပါ ဆောင်ရွက်ချက်များသည် သင့် iPhone/ iPod Touch တို့အား အဆင်မပြေပါက itune ကနေ restore ပြန်လုပ်ကောင်းလုပ်ရပါလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် backup လုပ်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ System ပိုင်းဆိုင်ရာများကို ပြင်ထားတာကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော တစ်စုံတစ်ခု ပြဿနာများကို လုံးဝ တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။
Zawgyi Font နှင့်
Zawgyi Font သည် System Font များကို hack ပြီးတော့ မြန်မာစာ စာလုံးများ ထည့်သွင်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သွင်းပြီးပါက remove ပြန်လုပ်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ remove ပြန်လုပ်ပါက itune မှ restore ပြန်လုပ်လိုက်ရပါမည်။ Zawgyi Font package သည် application များ အားလုံးနီးပါးတွင် မြန်မာစာ ပေါ်စေရန် font များကို ပြုပြင်ထားခြင်းသာဖြစ်သည်။
Zawgyi Keyboard ကိုသွင်းရာတွင် iKeyEx , Zawgyi Font နှင့် အခြား Dependencies များကို အလိုအလျောက်သွင်းသွားမည်ဖြစ်သည်။
အောက်ပါ ပြဿနာများ ကြုံတွေ့ရတတ်သည်။
၃။ အချို့ OS 3.0 < များဖြစ်ခဲ့လျှင် ပြဿနာတက်ခြင်း။
သင့်အနေနဲ့ အထက်ပါ အချက်များကို လက်ခံနိုင်သည် ဆိုမှ သွင်းပါရန်။
သွင်းပြီးပြီဆိုပါက သင့် iPhone/iPod Touch ကို restart ချလိုက်ပါ။ keyboard ထည့်သွင်းနည်းကို အောက်ရှိ Flash တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
ဒါဆိုရင် ရပါပြီ။ keyboard ပြောင်းချင်လျှင် ကမ္ဘာလုံးပုံလေးကို နှိပ်ကာ ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
သင့် iPhone/iPod Touch recovery ပြန်လုပ်ရခြင်း data lost များဖြစ်ခြင်း ၊ အခြား တစ်စုံတစ်ရာ ကိစ္စများဖြစ်ခြင်း တို့ကို လုံးဝ တာဝန်မယူပါ။ How to upgrade
အသစ်ထွက်ခဲ့သောကြောင့် upgrade လုပ်လိုလျှင် Cydia > Changes > Refresh ကိုနှိပ်ပြီး Upgrade ပေါ်လာပါက upgrade လုပ်ပါ။ ပြီးလျှင်
ပြီးလျှင် Mix and Match ကနေ Zawgyi keyboard ကို အပေါ်တွင် ပြခဲ့သည် video အတိုင်း ပြန်လည် ထည့်သွင်းနိုင်သည်။
ကျွန်တော် အကြံပြုလိုတာကတော့ မလိုအပ်ဘူး ဆိုရင်တော့ မသွင်းတာ Safe ဖြစ်ပါတယ်လို့ .....
Ref : http://www.moethagyar.info/
sai April 3, 2012 at 11:32 PM
ကျေးဇူးပြုပြီးတော့..samsung galaxy s2 ကိုမြန်မာဖောင့်/လက်ကွက်ထည့်နည်းလေးသင်ပြပေးပါ.......ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ....
sai April 3, 2012 at 11:33 PM
HlaingMin May 5, 2012 at 10:42 PM
ကို Sai ခင်ဗျာ samsung galaxy s2 မှာ မြန်မာဖောင့် နဲ့လက်ကွက် ထည့်နည်းကို Andriod နှင့်ပတ်သက်သမျှ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်မှာသွားဖတ်လိုက်ခင်ဗျာ။ လွယ်ပါတယ်။
Hausian July 24, 2012 at 11:10 PM
nokia 5800 zawgyi သွင်း၇လားမသိနော်...
aung zaw August 4, 2012 at 11:54 PM
samsung galaxy အားလုံးကို Andriod နှင့်ပတ်သက်သမျှ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်မှာသွားဖတ်လိုက်ခင်ဗျာ။ ဘာမျှထပ်ပြောစရာမလိုအောင်ပါပဲ။ ။အားလုံးစမ်းသပ်ပြီးပြီး။OK? ကျေးဇူးပါ ခင်ဗျားကြောင့်လဘ္ကရည်
၁၀၀ ဘိုးလောက်သောက်လိုက်ရပြီး (ကိုနေမင်းမောင်)။ ဒါပေမယ့် nokia တော့ လင့်တွေသေနေတာကြောင့်
Also visit my blog :: iphone5nano
I personally didn't buy an organic bassinet mattress because my model came with the non-organic variety. This allows your babies to sleep close to each other without clobbering or rolling over each other. Once you invest some time before you shop, you will end up way more satisfied with your bassinet.
Feel free to surf to my web blog; loft bed with Desk
ဇောင်း ထက် March 1, 2014 at 9:10 PM